Ole ihu dị na Email Gị kachasị ọhụrụ? | Martech Zone
Wenezde, August 3, 2011 Saturday, October 29, 2011 Douglas Karr
Ana m enweta ozi ịntanetị 100 dị mkpa kwa ụbọchị… Amaara m nke ahụ na-enye nsogbu. Ọ na-enye nsogbu karị ma email ahụ adịghị mkpa. Otu a ka ọ dị na ozi-e LinkedIn ndị a na-agwa m gbasara ndị nọ na netwọkụ m ndị gbanwere utu aha ọrụ. Enweghị m ike ijiri hụ ma nyochaa site na ihu wee pịa-iji chọpụta ihe na-eme ndị folks a na ọrụ ha. Ekwenyesiri m ike na email a LinkedIn nwere otu n'ime ọnụọgụ kachasị dị elu na ụlọ ọrụ email.
Ana m enweta ozi ịntanetị ogologo ụbọchị niile site na netwọkụ mmekọrịta na aha na mgbanwe ọkwa nke ndị nọ n'ime ha, mana anaghị m egwu omimi. Mgbe enwere foto, agbanyeghị, m na-eche echiche ozugbo ma pịa ya. It makes me wonder… ị hụrụ ihe ọ bụla ọnụ ọgụgụ na CTRs nke ozi ịntanetị na foto (bụghị ngwaahịa foto) nke ndị mmadụ? Echere m bụ na ọ bụrụ na ị tinye a ezigbo ihu na ozi ịntanetị gị, ị nwere ike ịnweta ezigbo nsonaazụ.
Social Media na Successga nke Ọma: tingcha na ogologo
You pụtara site n’itinye foto na mbinye aka ahụ?
Aug 4, 2011 na 8:04 PM
Ikekwe na mbinye aka, Kenneth! Echere m na foto nke ndị mmadụ na-akpali akpali mgbe niile - na-adọrọ adọrọ karịa ederede.
Ikekwe foto mbinye aka! Echere m na ndị folks nwere ike gbadaa maka nke ahụ. Enwere m ọchịchọ ịmata ma ọ bụ na-agbakwunye foto nke ndị ahịa na ndị ọrụ na-enyere aka ịhazi email ma mee ka ọ bụrụ ihe na-amasị ndị na-agụ ya. Ọ bụ ihe anyị nwere ike ịnwale!